Crossbody Bag Vagadziri - China Crossbody Bhegi Fekitori, Vatengesi
TIGERNU yechinyakare dhizaini mhando yepamusoro yakawanda chinangwa mutumwa bhegi revarume
Iri bhegi renhume rakagadzirirwa chero chinangwa, chakanakira varume, vadzidzi, basa, kufamba uye hupenyu hwezuva nezuva.
• Yakagadzirwa ne splashproof & kukwenya isingagadzi oxford, kwete chete yakasimba asi zvakare eco-inoshamwaridzika
Hukuru hwayo i21 * 6 * 26cm (L * W * H), diki muviri asi hukuru hukuru.Imwe imba huru ine padded inoshamisira piritsi slot inokwana 9.7 ″ iPad.Iyo zvakare yakakura kune ako ezuva nezuva stuffs.One kumberi homwe uye homwe imwe yekumashure yakanaka kune ako madiki zvinhu uye nyore kuwana.
• Anti kuba dhizaini, kumberi uye kumashure muhomwe zipi dzakavanzika uye zvisingaonekwe, zvichiita kuti zvinhu zvako zvinyatso chengetedzwa
• Iyo tambo kureba kunochinjika sekuenderana nezvaunoda
• Kurema kurema, bhegi rinongorema 0,28kg, haringawedzere mutoro wako kana rakazara zvakakwana
TIGERNU chipfuramabwe bhegi inokupa iwe wakanaka kupfeka ruzivo neakawandisa maficha.Tinogamuchirwa kuzotenga neTIGERNU, haumbofi wakaodzwa moyo pamabhegi eTIGERNU nemasevhisi avo
Crossbody Bhegi T-L5105
TIGERNU hombe inokwana nhume bhegi
Unyanzvi: ichi chipfuramabwe saizi bhegi iri 21 * 6 * 24cm (L * W * H) .Iine kamuri hombe ine padhedhi inovhundutsa piritsi yakagadzwa inokodzera iyo iPad inosvika 9.7inch.Iwo zvakare akapamhama zvakakwana kune ako mazuva ese magiya, senge chikwama, notibhuku, bhengi remagetsi etc. Mahomwe maviri epamberi zipi homwe yezvinhu zvidiki uye nyore kuwana. Imwe yakavanzwa anti kuba musana muhomwe yakanaka kune ako akakosha zvinhu.
Chinyorwa: Yakagadzirwa nekupwanya uye kukwenya kusagadzikana oxford, mhando yepamusoro, yakasimba uye eco-inoshamwaridzika. Zippers zvakagadzirwa neTIGERNU logo, inogara kwenguva refu uye inotsvedza kushandisa.
Maitiro: Bhanhire repafudzi rinogadziriswa sekuenderana nezvaunoda. Iyo iPad slot yakanyatso kuvezwa uye inovhundutsa. Zippers zvakavanzwa nekuda kwekuba chinangwa.
Chifuramabwe Bhegi T-S8027P
TIGERNU Ultra yakatetepa uye yakapepuka uremu crossbody chipfuramabwe bhegi
Iri bhegi rechipfuva rakanakira rekufamba naye ane akawanda maficha
• Slim dhizaini ine hukuru hukuru, saizi ndeye 18 * 9 * 35cm, inokwana 9.7 ″ piritsi uye zvimwe zvako zvezuva nezuva.
• Yakagadzirwa yemhando yepamusoro PU, yakasimba, inogara kwenguva refu uye eco-yakanaka
Kamuri rimwe hombe, kumberi imwe zipi homwe uye imwe yakavharika kumashure muhomwe, chengetedza zvinhu zvako zvese zvakarongeka uye nyore kupinda.
• Kuchengetedzwa kwakawanda, imba huru yakakiyiwa nebhurugwa, ichipa chengetedzo kune ako masosi
• Anogadzikana mafudzi bhanhire
• Chiedza chinorema, chinongorema 0.6kg
Bhegi rechipfuramabwe iri sarudzo yakasarudzika yehupenyu hwako hwezuva nezuva, kuchovha bhasikoro, zvemitambo, kufamba.
• Slim dhizaini ine hukuru hukuru, saizi iri 19 * 9 * 33cm, inokwana 9.7 ″ piritsi uye zvimwe zvako zvezuva nezuva.
• Yakagadzirwa yemhando yepamusoro splashproof & kukwenya kusagadzikana polyester, yakasimba, inogara kwenguva refu uye eco-inoshamwaridzika
• Chiedza chinorema, chinongorema 0.3kg
Chifuramabwe Bhegi T-S8027
Tigernu Ultra mutete uye wakareruka uremu crossbody chipfuramabwe bhegi
• Yakagadzirwa yemhando yepamusoro splashproof & kukwenya isingagadzi oxford, yakasimba, inogara kwenguva refu uye eco-inoshamwaridzika
• Kurema kurema
TIGERNU yakajairwa mitambo dhizaini bhegi
Iri bhegi remuchinjikwa rakagadzirirwa kugadzira seti yeTIGERNU bhegi T-B3351.
Chinyorwa: chakagadzirwa nesplashproof & kukwenya kusagadzikana oxford zvinhu, zvinogara, anti-kubvarura, eco-inoshamwaridzika.Zippers zvakagadzirwa neTIGERNU logo, yemhando yepamusoro uye inorwisa-ngura, kuputika-chiratidzo, kumeso kushandisa.
Unyanzvi: Chikamu chikuru chine homwe nomwe, dzakazara zvakakwana 7.9 ″ iPad yako, bhangi remagetsi, runhare, chikwama, bhuku rebhuku, bhodhoro remvura nezvimwewo Dzoka anti muhomwe muhomwe yakakwana kune zvako zvakakosha zvinhu.
Iyo yakanaka yemadhorobha maitiro chipfuramabwe bhegi, yakakwana yehupenyu hwako hwezuva nezuva. Tambo yepafudzi inogadziriswa yehurefu uye kuruboshwe kana kurudyi divi.Iyo yakasarudzika dhizaini yevadzidzi, varume, vakadzi, kufamba, basa, mitambo, kuchovha bhasikoro.
Chifuramabwe Bhegi T-S8089
TIGERNU yakawanda-chinangwa chipfuramabwe bhegi
Bhegi rechipfuramabwe rakakosha dhizaini bhegi, rinogona kushandiswa sehomwe yesingi kana bhegi panguva imwe chete.
Unyanzvi: Saizi bhegi repachipfuva iri 17 * 10 * 30cm (L * W * H), inokwana 9.7 ″ iPad.Iyo huru imba ine hukuru hukuru nehombodo diki dzehomwe dzinokwana ako emabhuku, foni, simba bhangi, chikwama, mvura zvichingoenda zvakadaro. Kune maviri akavharirwa mapepa epamberi akanaka kune ako mapeni, makiyi, runhare, tambo nezvimwewo zvekumashure kupokana nekubiwa RFID homwe yakakwana kune ako akakosha zvinhu zvakaita sebhangi kadhi, foni.
Hunhu: Bhegi repachipfuva rakagadzirwa nesplashproof & scratch resistant nylon + leather chaiyo, inogara yakasimba uye eco-hushamwari, panguva imwe chete iri mufashoni. Iyo zipi iri mhando yepamusoro yekuputika-chiratidzo uye yakatsetseka chaizvo kushandisa. Buckles akagadzirwa neTIGERNU logo, yakareba fashoni dhizaini.
Zvimiro: Iyo zipi yepafudzi tambo inogadziriswa uye inogona kushandiswa sehombodo seyako zvaunoda.Iyo inogona zvakare kugadziridzwa kuruboshwe kana kurudyi zvinoenderana netsika yako.Inogona kushandiswa sebhegi rimwe bhegi, bhegi, chipfuramabwe bhegi kumberi kana ku musana.
Iyo yekunze USB chiteshi inopa nyore kubhadharisa chako chishandiso chero nguva pasina kutora yako simba bhengi uye iyo nhare mbozha inoita kuti iwe unakirwe nemimhanzi kana iwe uri kuchovha bhasikoro kana kumhanya kana kuita mitambo.
TIGERNU fashoni mwenje uremu mutumwa bhegi rekuchovha bhasikoro
Chinyorwa: Iyi bhasikoro mutumwa bhegi rakagadzirwa neyakaomarara splashproof & kukwenya isingagadzirike polyester.Yakasimba kwazvo uye eco-inoshamwaridzika.Dzivirira zvinhu zvako zvese mumamiriro akanaka pasi pechero mamiriro ezvinhu. Iwo zipi ari emhando yepamusoro uye kuputika-chiratidzo, kumeso kuvhura nekuvhara.
Unyanzvi: Iri bhegi rekuzorora rakareruka, rinongorema 0.29kg, kukura kwayo i32 * 20.5 * 5cm (L * W * H), inokwana 7.9 ″ iPad.Pane muhomwe imwe huru mukati inogona kukubata zvinhu zvezuva nezuva zvakarongeka uye homwe imwe diki yezvinhu zvako zvidiki, saka unofanirwa kuchera uchitenderedza bhegi kuti uwane zvaunoda. Zvese zvinhu zvinogona kurongeka zvakarongeka. Iyo ichirova inokiyiwa ne buckle uye magineti ayo anogona kupa chengetedzo kune yako zvinhu. Unogona kupfeka sesheche bhegi kana bhegi nesarudzo yako. Yakakura yekushanda, bhizinesi, yekunze, yekuzorora kana kambasi uye kuchovha.
Iyo zvakare iri sevanhu dhizaini mutumwa bhegi. Iyo inogadziriswa padding bhanhire tambo inogona kudzikisa kuneta kwepafudzi. Icho chisarudzo chakanaka pane zvaunoda zvezuva nezuva.
TIGERNU inoshanda sling bhegi
Chinyorwa: Iri bhegi rechipfuramabwe rakagadzirwa nemhando yepamusoro splashproof & kukwenya kusagadzikana oxford, kurema kurema asi yakasimba.
Unyanzvi: Iri bhegi rekuzorora rinorema 0.42kg, saizi iri 21 * 11 * 31cm (L * W * H), inokwana 7.9 ″ iPad.Pane imwe homwe hombe mukati inogona kukubata iwe zvinhu zvezuva nezuva zvakaringana.Inokwana nzvimbo yePadad, simba kubhengi, amburera, mabhuku, magirazi, Unogona kupfeka sehombodo yesaga kana bhegi nesarudzo yako. Iyo yekumashure RFID homwe yakanaka kune ako akakosha zvinhu.Adjustable tambo inokodzera muviri wako chimiro. Dhizaini yakareruka yakanaka kune mazhinji mabasa ekunze, akasununguka kupfuura ayo akawandisa kana kurema.
Ini Icho chisarudzo chakanaka pane zvaunoda zvezuva nezuva.
Multipurpose: Iyo zvakare iri sevanhu dhizaini mutumwa bhegi. Iyo inogadziriswa padding bhanhire tambo inogona kudzikisira pfudzi kuneta.Ichi chipfuramabwe bhegi chinogona kushandiswa sechifuva bhegi uye bhegi bhegi, inokodzera yevakuru varume kana vakadzi. Yakakura kuchovha bhasikoro, kufamba kwezuva, kufamba, kudzika musasa, kushopa, uye basa.
TIGERNU fashoni dhizaini bhegi
Iyi bhegi bhegi bhegi idonhwe rakaumbwa bhegi bhegi, fashoni uye inobatsira zvikuru
Saizi: Chipfuva bhegi saga saizi L31 * W5 * H21cm, inokwana 7.9 ″ iPad.
Zvimiro zvehomwe yechipfuramabwe:
1. kurema uremu uye mhando yepamusoro: Yakagadzirwa yemhando yepamusoro splashproof & kukwenya kusagadzikana nylon, yakasimba uye eco-hushamwari, zvakare zvakareruka kurema uremu, chete 0.47kg.Perfect sarudzo yehupenyu hwako hwezuva nezuva, mutambo, kuchovha uye zvichingodaro. yemhando yepamusoro, kuputika-chiratidzo uye kumeso kushandisa, inogara kwenguva refu.
2. Yakagadziriswa tambo ine hardware mabhureki: tsime rakapfekedzwa bhanhire bhanhire rinogadziriswa kwehurefu uye zvakare rinogona kugadzirisa kuruboshwe kana kurudyi sekuenderana netsika yako. Yakapfekedzwa mesh tambo yakasununguka kwazvo kupfeka.
3. Kunze kwehedhifoni gomba dhizaini: iyo yekuvaka-mune nhare mbozha inoita kuti ugone kunakidzwa nemumhanzi uchichovha bhasikoro kana kumhanya.
4. Yakakodzera nzvimbo yekuchengetera: iguru hombe yekupfekera bhegi ine zipu diki homwe, chengeta zvinhu zvako zvese zvakarongeka.
Yakakwana chipfuramabwe bhegi yemitambo, kuchovha bhasikoro, kufamba uye hupenyu hwezuva nezuva hwevarume, vakadzi, vadzidzi.
TIGERNU anti kuba chipfuramabwe bhegi
Chinyorwa: Ichi chipfuramabwe chinoshandisa splashproof & kukwenya kusagadzikana oxford sechinhu chikuru zvinhu, 230D polyester seyakapetwa, ayo akasimba uye akachengeteka uye eco-inoshamwaridzika. Zipu dzinotsvedzerera uye hadzina mvura, zviri nyore kuvhura zipi uye kuvhura zipu, chengetedza zvinhu zvako kuti zvisatota kana kuchinaya.
Unyanzvi: Iyo anti kuba chipfuramabwe saizi saizi ndeye 25 * 12 * 42cm (L * W * H), inogona kukwana 9.7 ″ iPad. Iine hukuru hukuru nehomwe hombe nhatu. Chikamu chikuru chakakwanira zvaunoda zvezuva nezuva, foni, bhangi remagetsi, nhare, amburera, chikwama, mabhuku ekunyorera zvichingodaro. Homwe yekumashure inokwanisa kukubata iwe iPad inova inotyisa. Homwe yepamberi ndeye nyore kuwana kune ako anowanzoshandiswa zvinhu
Maitiro: Kune buri renzeve, rinoita kuti ugone kunakidzwa nemumhanzi kana uri panze uchimhanya kana kuchovha bhasikoro. Iyo tambo inogadziriswa yehurefu uye kuruboshwe uye kurudyi divi. Kadhi inobata uye hombodo yegirazi pane tambo kuti iwe usvike nyore zvaunoda.Imberi homwe zipi haina mvura uye inoratidzira, ichiita kuti uwedzere kuoneka paunenge uchiekisesaiza husiku.Mapapiro akasungirirwa uye kumashure zvakasununguka kupfeka.
Icho chisarudzo chakanaka sling bag yekurovedza muviri, zvemitambo, kumhanya, kumhanya, kwevadzidzi, varume, vakadzi vanoshanda uye hupenyu hwezuva nezuva.